PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-02-11 - Elombhaqanga libalisa ngendlala nangokungadlalwa okhozini FM
Elombhaqanga libalisa ngendlala nangokungadlalwa okhozini FM
Ilanga langeSonto - 2018-02-11 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
IQEMBU lombhaqanga eselineminyaka engama-54 laba khona liyibambile emculweni, likhala ngokungadlalwa kwezingoma zalo emsakazweni ukhozi FM.
Izintombi Zesimanjemanje okuyiqembu eliholwa ngunkz Jane Dlamini (70), zithi ukube ukhozi FM luyabanakekela ngabe isimo sendlala nobubha kungcono kunendlela abadla imbuya ngothi ngayo okwamanje.
Unkz Dlamini utshele ILANGA Langesonto ukuthi isimo asihambi kahle eqenjini labo ngenxa yokuthi abasaqashwa emagigini noma emakhonsathini. “Angibasoli nalaba abangasiqashi ngoba izingoma zethu azidlalwa emisakazweni yakuleli. Ngikhala kakhulu ngokhozi FM okuwumsakazo wethu esazi kahle ukuthi yiwo owasikhanda wasiphakamisa kusukela eminyakeni yowe-1964.
"Siyakholwa wukuthi ukuba ukhozi FM luyasinakekela lusidlale njengoba ludlala umculo kamasikandi, isimo singaba ngcono,” kusho ujane.
Uthi ngendlela okunzima ngayo kabakwazi nokuba benze IDVD yealbhamu abasanda kuyikhipha esihloko sithi ‘Ngaze Ngavelelwa. “Ngesikhathi izinto zisahamba kahle eminyakeni edlule, asikaze sicabange ukuthi imisakazo nomabonakude baleli zwe bayoke basishaye indiva size siswele ngisho imali yokuziphilisa.
"Kumanje nje siyisihlanu eqenjini sonke asisebenzi sethembele kulo msebenzi wethu. Singajabula uma kungaba khona inkampani eyenza amadvd engasenzela ngesihle sikwazi ukubonakala nakumabonakude hleze abalandeli bethu bazothinteka bawuthenge umculo wethu,” kubalisa ujane.
Leli phephandaba lehlulekile ukuthola ukuphawula kokhulume- la ukhozi FM, umnu Bonga Mpanza. ILANGA Langesonto limshayele kaningi kusukela ngoLwesine engalubambi ucingo lashiya nemiyalezo akayiphendulanga.
Unkz Zandile Tembe ecelwa ukuba aphawule uqale wathi uyamangala ukuthi Izintombi Zesimanjemanje zithi azidlalwa ngoba ngokwazi kwakhe ziyadlalwa.
Ube esethi akavunyelwe ukuphawula, ngumnu Mpanza onokuphawula okusemthethweni ubesika elijikayo nje.
Iqembu lezintombi Zesimanjemanje lisungulwe ngumufi, uhamilton Vala Nzimande, wedlula emhlabeni ngonyaka we-1984 labe seliholwa ngujane kuze kube manje. Abaculi balo ngupaulina Nkosi, upopi Monde, ubathulisiwe Phethoe, ujoyce Dube nojane.
Osasele kwabadala abadlala izinsimbi ngubethuel Bhengu odlala ibass Guitar.
Kugug’othandayo kuleli qembu, lisanyakaza kusangane izethameli esiteji, izitebhu zombhaqanga usazishaya njengoba zinjalo ujane yize eseneminyaka engama-70, unyawo lubuya phezulu. Ukudlalwa kwezingoma emisakazweni nakumabonakude kusiza abaculi ukuba kube khona imali engenayo ebizwa ngamaroyalties.
ISITHOMBE NGABE: 2.BP.BLOGSPOT.COM
IQEMBU lomculo wombhaqanga, Izintombi Zesimanjemanje elithi alidlalwa.